🥇 Jonga ibhola ekhatywayo kwi-Intanethi SIMAHLA « Amaphepha agqibelele » Live
Uyibukela njani ibhola kwi-intanethi?
Ukubukela ibhola ekhatywayo ngqo kwi-intanethi, akuyomfuneko ukuba siye kwiiwebhusayithi eziqhelekileyo zebhola ekhatywayo. Ngokuya nje kumaphepha ezemidlalo sinokwanelisa iimfuno zethu. Kodwa kutheni kucetyiswa? Ilula kakhulu: usasazo lwemidlalo yebhola ekhatywayo kwiindawo zezemidlalo zinyanisekile kubasebenzisi bazo kuba ukunyaniseka kubavumela ukuba bafumane imali.
Kwezi ndawo awuzukwazi ukubukela ibhola kuphela, kodwa uya kukwazi Bukela tennis kwi-intanethi, ifomula 1 racing kunye V ngu.
Awona maphepha afanelekileyo okubukela ibhola ekhatywayo kwi-intanethi simahla
Siyazi okokuqala ukuba kunzima kangakanani na ngamanye amaxesha ukubukela ibhola ekhatywayo kwi-intanethi simahla ngophendlo olukhawulezayo kwi-Intanethi. UGoogle usinika ukhetho oluninzi, kwaye xa ekugqibeleni sifumana iwebhusayithi egqibeleleyo kuthi, umdlalo sele uphelile.
Ukunqanda le ngxaki, nalu uluhlu lwe amaphepha angcono okubukela ibhola ekhatywayo kwi-intanethi simahla:
Le yenye yezona ndawo zidumileyo zebhola ekhatywayo ngenxa yokusebenziseka kwayo ngokulula, ukuguquguquka, kunye neentlobo ngeentlobo zeenketho zemidlalo. Umama webhola ekhatywayo yeHD yenye ye ii-portals ekufuneka uzithathele ingqalelo ukuba uyathanda ukubukela imidlalo iphila.
Iphepha elingabalulekanga ukuba ube nako bukela imidlalo yebhola ekhatywayo oyithandayo ngalo naliphi na ixesha kunye nendawo ngokuba ne-smartphone okanye iPC eqhagamshelwe kwi-Intanethi ezandleni zakho.
» Ngqo bomvu
Nangona eli phepha libeneengxaki ezininzi kumalungelo othumelo, liyaqhubeka ukudibanisa ubunkokeli bayo kwibhola ekhatywayo yasimahla kwi-intanethi. Ngqo bomvu iyaqhubeka nokuzama ukuba ngomnye wababhekisi kwiiphothali zebhola ekhatywayo kwi-intanethi.
Kweli phepha sinako bukela ibhola ekhatywayo yasimahla bukhoma ngokusebenzisa uluhlu olubanzi lwamakhonkco kunye neenketho. Kwi Indlu kaTiki Taka sinokufumana iiligi onokuthi uzibone kule webhusayithi zezona zibalulekileyo eYurophu: iSpanish, isiTaliyane, isiNgesi, isiFrentshi kunye nesiJamani.
Eli phepha lithathwa njengelona libalaseleyo lokubukela ibhola ekhatywayo yasimahla kwi-Intanethi. Ungaphosi Imidlalo engcono kakhulu, fumana konke malunga IPirlo TV kuhlalutyo lwethu.
» Ibhola ekhatywayo
Eli phepha libonisa a ishedyuli epheleleyo yemidlalo yeligi, apho uya kufumana i-Santander league, i-Copa del Rey, i-Champions League, kwaye ngokuqhelekileyo zonke iinxalenye zebhola ekhatywayo yaseSpain.
Eli phepha ngokuqinisekileyo linegama elithile elingaqhelekanga lewebhusayithi yebhola ekhatywayo. Nangona kunjalo, BatmanStream iya kukuvumela ukuba ufumane amakhonkco apho unokubukela imidlalo ibhola ekhatywayo kwi-intanethi simahla kwaye uphile, ngaphandle kwesidingo sokukhuphela nantoni na.
Sincoma ukuba ujonge kuphononongo lwethu lwe Ukudibana ukuze wazi iindawo ezilungileyo apho wonwabele umdlalo owuthandayo.
Fumana eyona bhola ibalaseleyo yamazwe ngamazwe kweli phepha. Yonke i imidlalo yeqela lakho olithandayo kunye neendidi ezininzi zamakhonkco oya kuzifumana kule Ezemidlalo.
Ithathwa njengenye yezona webhusayithi zibalaseleyo zokusasaza kwezemidlalo, kunye nekhalenda kunye zonke iintlobo zemidlalo ezikhoyo. Sihlalutya Ibhola ekhatywayo ukuze ukwazi ukubukela eyona bhola ilungileyo simahla.
Le portal yenye ye ababhekiseli ukubukela ibhola kwi-intanethi. Fumana into entsha elitegoal kwaye ungaphoswa njani yiReal Madrid-Barcelona ngohlalutyo esikunika lona.
Iiwebhusayithi ezihlawulwa kakhulu zokubukela ibhola kwi-intanethi
Eli phepha liyafumaneka kwi-Smart TV, IOS, Android, PC/Mac, Play Station kunye neChromecast.
» IMovistar Champions League
Eli phepha limalunga nejelo elihlawulwayo lokubukela i-Champions League kunye ne-European League.
» Ibhola yeOrenji yeTV
Kwi-Orange TV unokubukela yonke ibhola ekhatywayo kwi-intanethi oyifunayo kwiiligi ezahlukeneyo nangezicwangciso zothumelo.
Leliphi elona phepha lilungileyo lokubukela ibhola ekhatywayo simahla?
Kuyo yonke i-intanethi sinokufumana amaphepha ahlukeneyo apho sinokubukela ibhola ekhatywayo kwi-intanethi, kodwa ngaba ungayibukela ngokwenene imidlalo ngaphandle kokusikeka? Ngezantsi siqokelela ezona ndawo zibalaseleyo zokubukela ibhola kwi-intanethi simahla ngaphandle kokusikwa. Kuba akukho nto icaphukisayo njengokubukela iqela lethu esilithandayo kwaye usasazo luqala ukuyeka, lubangela ijerks kunye nomsindo.
Ukunqanda ezo zitsalo, siqulunqe awona maseva angcono, uninzi bakhululekile kwaye bachitha izibonelelo ezimbalwa, ukuze ukwazi ukubukela yonke imidlalo kwi-intanethi ngaphandle kokuphazamiseka. Zombini iinkonzo zasimahla kunye nezihlawulelwayo ziye zaba eyona ndlela ilungileyo yokubukela iqela lakho lidlala, mhlawumbi ngenxa yokuba ukwenye indawo okanye kuba ufuna ukubukela imidlalo ngqo ukusuka ekhaya ngaphandle kokushiya igumbi lakho lokuhlala, ezi ndlela zosasazo lwe-intanethi (zihlala kwi-intanethi) zezona zicetyiswayo.
Iiwebhusayithi ezininzi esinokuzifumana ukubukela imidlalo yebhola ekhatywayo azinawo umgangatho womfanekiso ofunekayo kwaye usasazo luyayeka rhoqo kabini kathathu. Ukongeza, bakuzalisa ngeentengiso okanye awukwazi ukufumana yonke imidlalo.
Ngenxa yeso sizathu siye uqokelele amaphepha apho ungazukuba nalo uhlobo lwengxaki Ngexesha elingephi ukuze ukwazi ukubukela ibhola ukwisofa yakho ekhaya.
Phezulu kwe-5 yamaphepha angcono okuBukela iSoka kwi-Intanethi
Nantsi ifayile Awona maphepha angcono kakhulu okubukela ibhola ekhatywayo. Ngamnye uneenzuzo zakhe kwaye ngoko unako khetha eyona ifanele iimfuno zakho ngamaxesha onke. La ngawona maphepha acetyiswayo ukuba ubukele ibhola ekhatywayo ngqo:
Ungayifumana eyona bhola ibalaseleyo ngaphandle kokushiya ikhaya
Le webhusayithi inenkonzo yomrhumo wenyanga apho unokurhuma ukuba ubukele ibhola ekhatywayo. Inkonzo iye yahlala kwimarike ixesha elingaphantsi kunezinye zesitayela esifanayo, kodwa nangona kunjalo iye yakwazi ukugcina kunye nezona zinkulu.
Ine- ukusebenza kakuhle kunye nenkxaso yobugcisa obutofotofo, ngoko awuyi kuba nakuphi na ukungaphumeleli ngexesha losasazo olubukeleyo. Ukongeza, yakhe iipakethi zomdlalo zigqibelele kakhulu kwaye siya kuba nakho ukufumana iiligi kwihlabathi liphela.
Enye yeenzuzo ezinkulu kakhulu, kukuba inakho inkxaso yezixhobo eziphathwayo kunye neetafile, ngoko unokuthatha ibhola kunye nawe naphi na.
Phakathi kwamajelo akho Inoku kulandelayo:
Yiba kwiLaLiga Max
Sithathela ingqalelo le lolona khetho lubalaseleyo lwentlawulo ukuba asifuni kuphoswa nguwuphi na umdlalo weqela lethu esilithandayo kulo lonke ukhuphiswano.
Yeyiphi imidlalo esinokuyibona kwiRoja Directa?
Le portal yebhola ekhatywayo yenye yezona zinto zaziwa ngokubukela imidlalo simahla. Ngaphandle kwento yokuba ibisebenza iminyaka emininzi, ibisoloko itshintsha isizinda sayo ngokuqhubekayo.
Kule webhusayithi sinokufumana yonke imidlalo yebhola ekhatywayo ye iiligi ezigqwesileyo kwihlabathi, ukongeza ekuboneni ezinye iinkalo zemidlalo ezifana nentenetya, ibhola yomnyazi okanye imidlalo yeemoto.
Ukuba ufuna ukwazi ngakumbi malunga neRoja Directa, sicebisa ukuba ujonge yethu Uhlalutyo olupheleleyo.
Unayo yonke ibhola ekhatywayo eMovistar
Ithathwa ngabaninzi njengeyona nkonzo ilungileyo yokubukela ibhola ngaphandle kweengxaki ezifumanekayo, ngokungathandabuzekiyo inketho yokuqwalasela. Ibikho kwimarike iminyaka kwaye iyaqhubeka nokuba yenye ukhetho olupheleleyo nolungcono lokubukela ibhola ekhatywayo kwi-intanethi ngaphandle kokusikwa.
Ifumaneka kwinkonzo yentlawulo yenyanga, i-Movistar ibonelela kakhulu ezahlukeneyo zemidlalo kunye neeligi ezahlukeneyo kunye nokhuphiswano oluvela kwihlabathi liphela. Ukusuka kwiwebhusayithi yayo ungabhalisa kwaye wenze isivumelwano neenkonzo zayo ukuze ukwazi ukonwabela yonke ibhola ekhatywayo
Phakathi amajelo afumanekayo ukuba iMovistar inikezela kwinkonzo yayo ibandakanya oku kulandelayo:
ILaLiga Santander, kunye nomdlalo omkhulu obandakanyiweyo kunye neminye imidlalo yosuku
INdebe yoKumkani epheleleyo
I-UEFA Champions League kunye ne-UEFA Europa League
Awona manqanaba aphezulu ezizwe ngezizwe afana nePremier League, iBundesliga, iCalcio kunye nezinye ezininzi
Fumana umdlalo weqela lakho olithandayo kwiBatman Stream
Le portal yebhola ekhatywayo yasimahla yenye yezona zinto zikhethwayo ngaphandle. Ngamajelo angama-30 wokubukela ibhola ekhatywayo kuzo zonke iiligi zehlabathi, ukongeza kwimidlalo yosuku, sinokufumana iiyure zemidlalo yonke imihla. Yi izinzile kakhulu, iwebhusayithi ephendulayo apho unokubukela ibhola ekhatywayo simahla kunye neminye imidlalo esuka kwikhompyuter yakho, iselula okanye ithebhulethi ngaphandle kweengxaki.
Inentengiso kwaye kusenokufuneka ulinde imizuzwana embalwa ngaphambi kokuba uqalise ukubukela umdlalo okhethiweyo, kodwa emva kokuba intengiso idlulile, unokonwabela usasazo simahla kwaye ngaphandle kokuphazamiseka.
Ukuba ufuna ukwazi ngakumbi malunga nale portal ukubukela ibhola unayo yethu Uphononongo olupheleleyo kwikhonkco elingezantsi.
Ngaba ukulungele ukufumanisa yonke imidlalo onokuyibukela kwi-Elitegol?
Le portal ine umxholo we-intanethi, zombini ziphila kwaye zimisiwe kuzo zonke iiligi zehlabathi. Ungayibukela imidlalo yebhola ekhatywayo uhlala okanye urekhodwe kwaye uyichole nangaliphi na ixesha ukuze ungaphoswa nomzuzu omnye.
Inenani elikhulu lamatshaneli ukonwabela imidlalo yebhola ekhatywayo yasimahla kwi-Intanethi. Ngaba kunjalo zifumaneka zonke iiligi ezibalulekileyo kunye neendebe emhlabeni kwaye xa kubanjwa iindebe zeHlabathi okanye ubuNtshatsheli baseYurophu, ungayonwabela imidlalo yazo.
Nalu uphononongo lwethu olupheleleyo malunga nale portal ukubukela ibhola simahla.
Izigqibo zokubona iSoccer Online ngaphandle kokusikwa
Nokuba uphi na, ukuba le nto uyikhangelayo yonwabela ikhompyuter yakho nangaliphi na ixesha losuku, Uya kukwazi ukuyenza kuzo zonke iiwebhusayithi zale Top.
Enkosi koku uya kukwazi ukonwabela kwi-intanethi, phila kwaye ukhululekile kuyo yonke imidlalo ngaphandle kokusikeka. Ezi webhusayithi zihlaziywa yonke imihla kwaye zibonelela ngomxholo ohlaziyiweyo ukuze ukwazi ukuyifumana le nto uyifunayo ngamaxesha onke.
Siyakukhumbuza ukuba olu luhlu lunika ulwazi kuphela ukuze ufunde ngeenkonzo ezibonelelwayo.
Iingcebiso kunye nezilumkiso malunga nokubukela ibhola kwi-intanethi
Ngokuqinisekileyo uyayazi kodwa ikulungele ukunyanzelisa kuyo: ukuba awunalo uqhagamshelwano olulungileyo, nawuphi na umdlalo uya kuba yintloko.
Lungiselela umdlalo wakho we-intanethi ngexesha elithile. Ngale nto sithetha ukuba awukushiyi ukuhanjiswa ngomzuzu wokugqibela kodwa uvavanya iqonga lakho kwangaphambili.
Ezinye iiwebhusayithi zasimahla zibonelela ngenqanaba elisezantsi lomgangatho kuneenketho ezihlawulweyo, ngaphezu kokusetyenziswa ngokugqithiseleyo kweentengiso.
Khangela olona khetho lungcono kancinci kwangaphambili kwaye ukuba kunokwenzeka uhlale naye.
Ucinga ukuba inokuba luncedo emntwini? Sincede sifikelele abantu abaninzi, kufuneka ucofe nje kwinethiwekhi yoluntu oyithandayo kwaye yiloo nto!
Nge-11 kaJanuwari, 2020, 10: 41 pm
Enkosi ngolwazi. Igalelo elikhulu lale webhusayithi. Molweni!
NgoJuni 4, 2021, 1: 45 am
Igalelo likhulu. Fumana umbuliso onobubele.
Iindlela zokubukela ibhola kwi-intanethi
imposiso: Musa ukuhleba!